Imithi > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Indima yeGlucophage ekwelashweni kwe-pathogenetic yohlobo 2 lwesifo sikashukela Eshicilelwe emaphephandabeni: umdlavuza webele uMfu 18, uNo 10, 2010 Ph.D. I-I.V. Kononenko, uprofesa O.M. ...
I-Diabefarm MV 30 - isidakamizwa sokwehlisa ushukela wegazi
I-Diabefarm mv 30 mg: intengo yethebhulethi, imiyalo kanye nokubuyekezwa, ukuphikisana kwezidakamizwa zohlobo 2 lwesifo sikashukela yisifo se-metabolic lapho kukhuphuka khona amazinga kashukela wegazi. ...
I-Universal nicotinic acid: yini echazwe ku-cardiology, cosmetology? Umuthi usetshenziselwa ukuvikela kanye nokwelashwa kokuntuleka kwe-Vitamin PP (B3), isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isigaxa somgogodla, umthambo kanye nemithambo yegazi. ...
Yiliphi iso eliwela ushukela engingalisebenzisa?
Amaconsi wamehlo anesifo sikashukela i-mellitus (retinopathy) Isifo sikashukela yindlela eyinkimbinkimbi ye-endocrine ebonakala ngezinkinga ezinkulu. Lesi sifo sithinta amehlo. Izinkinga kungenzeka zingenzeki, kepha iqiniso lokuba khona kwazo akumele liphikiswe. ...
Yehlisa ukusebenza kweCarbon Cholesterol ephezulu
Amalahle asebenze kanye ne-cholestyramine ukwehlisa i-cholesterol. Amalahle asetshenzisiwe anciphisa izinga lama-lipids, cholesterol ne-triglycerides ku-serum yegazi, isibindi, inhliziyo nobuchopho. ...
I-Lipoic acid yehlisa i-cholesterol noma cha
Ingabe amafutha aqukethe i-cholesterol, futhi ingabe amanoni akhuphula i-cholesterol yegazi? Iminyaka eminingi engaphumelelanga ekulweni neCHOLESTEROL? Inhloko Yesikhungo: “Uyokumangaza ukuthi kulula kanjani ukwehlisa i-cholesterol ngokumane uyithathe nsuku zonke. ...
Amaphilisi okwehlisa ushukela wegazi: izinhlobo nokusebenza kahle kushukela
Izidakamizwa zokwehlisa ushukela wegazi: yiziphi ezisebenzayo kakhulu. Uma isimo seziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 silungiswa kuphela ngemijovo ye-insulin, khona-ke i-SD-2 ilashwa ngempumelelo ngemithi. ...
I-Hypoglycemic drug drug yeqembu lesibili le-Glybomet
Amathebulethi e-Hypoglycemic "Glybomet": imiyalo esetshenziswayo Lo muthi we-hypoglycemic ukhiqizwa ngohlobo lwemigqa eyindilinga yomthunzi omhlophe. ...
I-Glibenclamide: imiyalo yokusetshenziswa kwe-ejenti ye-hypoglycemic
I-Pharmacodynamics ne-pharmacokinetics I-Glibenclamide iyisidakamizwa esidalwa yi-hypoglycemic somlomo esihlobene nokuthathwe kushukela. ...
Imijovo ye-pancreatic ye-pancreatitis
Ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis. Ukuvuvukala kwezicubu ze-pancreatic kuthiwa yi-pancreatitis. Ifomu elibi lalesi sifo lihambisana nokulimazeka kwesitho esibuhlungu, ukuvuvukala kanye ne-necrotic. ...
I-Mechanism of action kanye nokusebenza ngempumelelo kweTiazolidinediones ikhipha imiphumela ngokuncipha kokumelana ne-insulin. Kukhona ama-2 thiazolidinediones atholakalayo emakethe - rosiglitazone (Avandia) kanye ne-pioglitazone (Actos). ...
Ukwelapha Cuba for unyawo sikashukela kanye sikashukela
Ama-Amur velvet amajikijolo kashukela
Ama-Amur velvet amajikijolo esifo sikashukela mellitus Isikhathi esihle sosuku! Igama lami nginguHalisat Suleymanova - ngiyi-phytotherapist. ...
Chaga yesifo sikashukela
Chaga ekwelapheni isifo sikashukela. Usizo. Isifo sikashukela i-mellitus sesidlangile kulezi zinsuku kangangokuba sesivele sibalwa phakathi "kwezifo zakulelikhulu leminyaka." Hhayi abantu asebekhulile kuphela, kepha futhi nabantu abasha kakhulu bahlupheka ngakho. ...
I-Penzital - imiyalo esetshenziswayo, izinkomba zokusetshenziswa, ama-analogues, intengo nokubuyekezwa
Ukukhishwa kwesimo nokwakheka kwe-Enzistal-P kukhishwa ngendlela yamathebhulethi afakwe ngaphakathi: i-biconvex, nxazonke, epinki (ama-pcs ayi-10.) Emabhulini, inqwaba yamakhadibhodi e-1, 2, 4 noma 8. ...
Izibhebhe zeGlatiniin: izinkomba zokusebenzisa, imiphumela emibi kanye nezimpawu zomuthi
Imiyalo ye-Gliformin yokusetshenziswa, i-contraindication, imiphumela emibi, ukubuyekezwa kwe-ejenti ye-Oral hypoglycemic eqenjini le-Biguanide. ...
Amakhambi Esifo Sikashukela
Amakhambi okwelashwa kwesifo sikashukela sikashukela mellitus muva nje, ngeshwa, sekuyisifo esande kakhulu. ...
Ungayithatha kanjani i-Octolipen yesifo sikashukela?
Ukukhulelwa nokukhishwa kwe-Oktolipen akunconyelwanga kwabesifazane abakhulelwe nababambisayo, ngoba okwamanje akukho mininingwane eqondile yokuthi ukusetshenziswa kwayo kuthinta kanjani ukukhula kwesibeletho nokuthi kuthinta ubisi lwebele yini. ...
Amathebulethi namalungiselelo wokugcina isibindi
Ithebhulethi yokwelashwa kwamanyikwe nesibindi. Ukwelashwa kwezidakamizwa kubhekwa njengesisekelo sokwelashwa kwesibindi namanyikwe. ...
4 Ukulungiselela ama-pancreatic hormone
2. Izidakamizwa ze-Antithyroid Izidakamizwa ze-Antithyroid zisetshenziselwa i-hyperthyroidism (thyrotooticosis, isifo se-bazedovy). ...
Ushukela wegazi 6, amayunithi ama-5, kufanelekile yini ukuqeda ukudla okuthandayo bese uzinika ushukela?
Ungaba nekhanda elinesifo sikashukela
Izifo Zesifo SikashukelaIzindlelaUkudla ngesifo sikashukelaIsifo sikashukela kubantu besifazaneIzindabaIsifo sikashukelaIsifo sikashukela nezinsoAmanyikweUkuxilongaIsifo sikashukela